Yini eyenze zathatha isicoco seligi izitshudeni? | News24
Yini eyenze zathatha isicoco seligi izitshudeni?
CISHE uMzansi wonkana uzibuza umbuzo owodwa wokuthi yini eyenze iBidvest Wits yaba ngoshampeni kulezinsuku?
Kungabe imisebenzi kamqeqeshi uGavin Hunt obonakala engafuniseli ngokuqeqesha kanye nokudlalela ukunqoba noma ngabe yini? Kungabe yimali eyafakwa ngabaxhasi baka Bidvest ngaleya minyaka mhlazane beze beshintsha igama nalapho kwasuswa khona uWits University bagcina sebebizwa ngeBidvest Wits?
Yingabe yikhwalithi yabadlali ekhankase ngabo noma yindlela nje abaphathi bayo abaphethe ngayo iqembu jikelele ?
Umqeqeshi waleliqembu uHunt uthi okokuqala nje izwe kufanele lazi ukuthi leliqembu kade laqala ukuphupha ngokuwina iligi ngelinye ilanga, base beqala ukusebenza kanzima nawowonke umuntu.
Lomnumzane owaziwa cishe abadlali bonke baseMzansi ukuthi akawumeli ushidi futhi akanaso isikhathi somdlali ongazi ukuthi ufunani empilweni, uthi bekulukhuni kwasetshe kodwa kusetshenziwe.
“Lomsebenzi ogcine ufezekile ngo2017 kade waqala. Phela ukwakha nokusebenza kanzima akwenzeki ngezinyanga ezimbili noma ngonyaka owodwa.
Okokuqala nje kufanele ube nabadlali abafanele ukukudlalela uma ufuna ukunqoba izinto.
Kuningi esakushintsha ekuphatheni nasensimini,” kusho uHunt.
UHunt uthi angabongwa nje njengomqeqeshi kodwa kahle kahle abantu ekufanelwe bathulelwe isigqoko abadlali abadlalele ukufa isizini yonke kanye nabaphathi bekilabhu. “Phela uma zonke izinhlaka zethimu zingahlelekile, yonke into ivele ibhimbe kuwowonke amadiphathimente.
Ngamafuphi ngithi, ukuphila kwekilabhu kanye nokunqoba kwayo kuqala le phezulu ezikhulwini kuze kuyoshaya phansi enkundleni.”
Kanti isikhulu esiphakeme seWits (CEO) uJose’ Ferreira uthi iqembu lonke kufanele libongwe ngoba kusetshenzwe isizini yonke kwaze kwayosa emnyango.
“Ukuwina iligi noma ukuba yiqembu labanqobi kudinga ukusebenza ngokubambisana yonke indawo,” kusho uFerreira.